လုပ်ငန်းခွင်စီမံကြီးကြပ်မှု Supervisory Management သင်တန်း
မကြာမှီပြောင်းလဲလာတော့မဲ့ နိုင်ငံတကာခေတ်ပြိုင်စီးပွားရေးအတွက် တိုးတက်လာပြီဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းများတွင် ဆောင်ရွက်လိုသူများအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်လာတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ ဖြင့် တိုးတက်လာတဲ့ အနာဂတ်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကို ပြောင်းလဲဖန်တီးယူလိုက်ပါ။
MESI သင်တန်းကျောင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ မန်နေဂျာများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများ သင်တန်းသားပေါင်း (၅၀၀၀) ကျော်မှ တခဲနက်တက်ရောက်ပြီးဖြစ်လို့၊ သင်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်စီမံခန့်မှုပုံစံများ တိုးတက်ကျွမ်းကျင်ပြီး အနာဂတ်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ တိုးတက်မှုအသိပညာများ ရယူနိုင်စေရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။
What ယခု စီးပွားရေးသင်တန်းမှ ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိစေနိုင်မှာလဲ…???
အနာဂတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် လက်တွေ့ကျကျမဖြစ်မနေအသုံးဝင်စေမည့် လုပ်ငန်းခွင်စီမံခန့်ခွဲမှုသီးသန့် ဘာသာရပ်အစုံကို အချိန်တိုအတွင်း လေ့လာနိုင်ဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းတွင် ရရှိစေနိုင်မည့် လုပ်ငန်းသုံးစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံများ
(1) Management & Leadership (စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှု)
- POLC, Strategy, Principle of Management, SMART, PDCA, TQM, RBM, Leadership Roles, Leader
(2) Admin & HR Management (ရုံးနှင့် ၀န်ထမ်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု)
- Meeting, Reporting, Team-Work, Admin & Office Management, HR Functions, HRD/ HRM/ Core Value
(3) Marketing Management (ဈေးကွက်စီးပွားရေး ဖော်ဆောင်မှု)
- Marketing Principles, Marketing Plan (8-Ps), Sale Management, Kotler on Marketing, PLC, 4P-4C
စသည့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများအတွက် မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အသိပညာများကို (ရက်တိုအတွင်း) သင်းတန်းမှ ရရှိစေနိုင်မှာဖို့ နိုင်ငံတကာခေတ်ပြိုင်တိုးတက်လာမဲ့ အနာဂတ်လုပ်ငန်းများအတွက် လက်တွေ့အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Who ယခုသင်တန်းကို ဘယ်သူတွေ တက်ရောက်ထားသင့်သလဲ…???
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပြင်ဆင်နေသူများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုမန်နေဂျာအဆင့်များ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း အုပ်ချုပ်နေသူများ တိုးတက်လာပြီဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာခေတ်ပြိုင်စီးပွားရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတက်ရောက်ထားသင့်ပါတယ်။
ယခုလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ MESI ကျောင်းခွဲများဖွင့်လှစ်မှု Promotion အထူးအစီအစဉ်များ။
(၁) ၃-ဦးအထက် တက်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် 20 % Discount ရရှိနိုင်ပါမည်။
(၃) သင်တန်းကြေးအား အရစ်ကျပုံစံဖြင့် (၂-ကြိမ်) ခွဲသွင်းနိုင်ခြင်း၊ 10 % Discount Coupon များ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါမည်။
(၄) သင်တန်းတွင်ကံထူးပါက အပ်နှံ့ထားသော သင်တန်းကြေး၏ (၅၀ %) အား အထူးကံစမ်းမဲ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါမည်။
သင်ကြားပေးမည့် ပညာရှင်ဆရာများ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း။
(MESI ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ မကွေး၊ တောင်ကြီး၊ မြတ်) ကျောင်းခွဲများအား စီမံအုပ်ချုပ်နေပြီး၊ ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် စီးပွားရေးအကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိတဲ့ - Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI) စီးပွားရေးသင်တန်းကျောင်း၏ CEO & Principal ဖြစ်သူ ဆရာဦးဇင်ဖြိုးပိုင် ကိုယ်တိုင်မှဦးစီးသင်ကြားပေးပါမည်။
ပါမောက္ခဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၏ တပည့်ဖြစ်သော ဦးစိုးဟိန်း (MD, SMEs Business Institute), (Vice President of MESI)၊ (Director, BaganMart.com) နှင့် (Professional Member of American Marketing Association)
MESI သင်တန်းကျောင်း၏ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာဖြစ်သော ဦးဟိန်းမင်းဌေး (Assistant Director, MESI Yangon) နှင့် (County Logistic Manager, PU-AMI, France INGO) နှင့်အတူ
HR Journal တွင် ပိုင်စိုး (Management) အမည်ဖြင့် ဆောင်းပါးများရေးသားနေပြီး၊ MESI သင်တန်းကျောင်း၏ TOT Trainer ဖြစ်သော ဆရာပိုင်စိုး (Management) တို့မှ ပါဝင်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုယ်တိုင် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းသုံး အတွေ့အကြုံ၊ နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းခွင် ပုံစံများ၊ စီးပွားရေးနယ်ပယ်သုံး စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံများကို လက်တွေ့ကျကျ မျှဝေသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Supervisory Management Training သင်တန်းအစီအစဉ်များ
နေ့ရက် ။ 30 - 31 ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၆ (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ)
အချိန် ။ နံနက် (၉း၀၀) နာရီ (မှ) ညနေ (၄း၀၀) နာရီ
နေရာ ။ အမှတ် (၈၉) ၂ လွှာ၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ SPIRIT အနီး၊ စမ်းချောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
သင်တန်းကြေး ။ (၆-သောင်း ကျပ်) (၅၀ % အခမဲ့ ကံစမ်းမဲ ရရှိနိုင်ပါမည်) လ္ဘက်ရည် မှုန့်ဧည့်ခံမှုပါဝင်မည်။
ဆက်သွယ်ရန် ။ ဖုန်း - 09 788 888 434, 09 7888 99 774, Email: mesiyangon@gmail.com
လူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိပြီး၊ ကြိုတင်တက်ရောက်ရန်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများရှိခြင်းကြောင့် ဦးစွာစာရင်းပေးသွင်း ဆက်သွယ်သူများသို့ ဦးစားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
တခြားတန်းခွဲများ တက်ရောက်လိုပါကလည်း ကြိုတင်ဆက်သွယ် စာရင်းပေးသွင်းထားနိုင်ပါပြီ
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ တောင်ကြီး၊ မကွေး၊ မြိတ်၊ ကလေး၊ ပဲခူး စတဲ့ မြို့ကြီးပေါင်း (၂၀) ကျော်တွင် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ မန်နေဂျာများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများ (၅၀၀၀) ကျော်အား သင်တန်းများပို့ချပေးထားလျှက် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင် သင်တန်းအများဆုံးပေးနေသော …